Breaking: सुस्मिताकी आमा पहिलोपल्ट जंगि'ईन्, अदा*लतबाट आयो आदेश यस्तो, सम्पती सकेपनि ज्वाईलाई न*छोड्ने -
Home News Breaking: सुस्मिताकी आमा पहिलोपल्ट जंगि’ईन्, अदा*लतबाट आयो आदेश यस्तो, सम्पती सकेपनि ज्वाईलाई...
Breaking: सुस्मिताकी आमा पहिलोपल्ट जंगि’ईन्, अदा*लतबाट आयो आदेश यस्तो, सम्पती सकेपनि ज्वाईलाई न*छोड्ने
‘हाम्रो पार्टीमा उत्तर र दक्षिणतिर दुईवटा हेर्डक्वार्टर थिए। उत्तरतिरको हेर्डक्वार्टरबाट निर्देशितहरू मकहाँ आउँछन्। हामीतिर आउनुपर्‍यो भन्छन्। दक्षिणतिरबाट पनि आउँछन्। माले हुँदा मसँग भएका साथीहरू आउँछन्, त्यस्तै कुरा गर्छन्। तर म कतै नलागी जुटाउनेतिर लागेको छु’, उनले बुधबार ललितपुरमा आयोजित अभियान घोषणा कार्यक्रममा भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने हामीलाई दुई वर्ष समय प्राप्त हुन्छ। त्यो दुई वर्षमा दुवै समूहलाई म ल्याउँछु। केपी ओली कहिल्यै एकताको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो। म हुँदा प्रचण्डजी एकताको पक्षमा हो। अहिले उहाँहरू दुईतिर फर्कनु भएको छ। म जान्छु र केपी ओलीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डलाई केपी ओलीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो तागत मसँग छ।’
उनले पार्टी विभाजनमा ओली र दाहाल दुवैको बराबरी दोष रहेको बताए। दुवै नेतालाई तराजुमा जोखेर हेर्दा घटीबढी नरहेको निष्कर्ष उनले सुनाए। ‘परिपक्व तरिकाबाट एकता राष्ट्रिय अभियानमा जुटेको छु। म थाक्दिनँ। ७३ वर्षसम्म थाकिनँ। अब कति बाँच्ने ठेगान छैन। जति दिन दुई खुट्टाले थामिन्छ, त्यही दिनसम्म थाक्दिनँ’, उनले भने, ‘६ महिनापछि हेर्नुहोला काठमाडौंमा बस्न नसक्ने गरी मान्छे एकता अभियानमा जुटाउँछौं। त्यसबेला उहाँहरू (ओली र दाहाल) सेनापति हुनुहुन्छ। तर सैनिकहरू सकिसकेको हुन्छ, उहाँहरूको।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि र आएपछि पनि विभिन्न विकल्पमा रहेर पुनः एकता गराउन सकिने अवधारणा अघि सारेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचन भए दुवै अवस्थामा भिन्नभिन्न केन्द्रअन्तर्गत पार्टी सञ्चालन र कार्यगत एकताका आधारमा निर्वाचनमा सामेल हुन सकिने जनाएका छन्। यस्तै, सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भए संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिने अवधारणा पनि उनले ल्याएका छन्। दुई समूह एक नभई विभाजन भए दुवै पार्टीसँग मित्रवत् सम्बन्ध राखेर अगाडि जानुपर्ने उनको अवधारणा छ।
गौतमले आफू नेतृत्वको अभियानमा पार्टी केन्द्रीय समितिका एक मात्र सदस्य हरि पराजुलीको साथ लिएका छन्। यस्तै पूर्वभीसी हीराबहादुर महर्जन, विनोद खड्का, माया ज्ञवाली, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर सरस्वती रिजाल खड्का, पत्नी तुलसा थापा, प्रा.डा. प्रकाशमान श्रेष्ठ, भोजराज भट्टराई, डीबी कार्कीलगायत अभियानमा जोडिएका छन्।
Previous articleअर्जुन बिकलाई श्री’मतीले नै जे’ल हालेको खु’लासा ! जं’गिदै बोलिन सरु सुनुवार कसैलाई नछो’ड्ने चे’त’वानी
Next articleभारतको यात्रा नगर्न अमेरिकी नागरिकलाई बाइडेन सरकारको कडा आ*देश, भारतमा खै’लाबैला ! जे पनि हुन सक्ने